Araka ny fantatra, hatrany am-boalohany, dia efa voasokajy araka ny tandrify azy avy ny tambin-karama tokony ho azon’ny rehetra izay mandray anjara amin’ny fankalazana sy fampiakoakoana ny fihaonana goavana toy izao. Ny zava-misy anefa dia efa nampanantena izao ny sampandraharaha roa tonta, na tamin’ny alalan’ny antso an-tariby na tamin’ny fifampiresahana tsotra, fa samy hahazo ny valin-kasasarany ny rehetra. Ny avy eo anivon’ny mpanao gazety manokana, tsy mbola nahazo ny anjarany na dia efa nampanantenaina hoe aorian’ny hetsika aza no handray ny azy. Betsaka amin’ireo tompon’andraiki-tserasera mpanatanteraka ihany koa amin’izao fotoana izao no nahazoana loharanom-baovao fa mbola naman’ny niasa maina izy ireo. Haino aman-jery isan-karazany moa no efa namoaka ny vaovao mikasika ny fisiana mpanitsoka vola amin’ity minisitera ity kanefa hatreto tsy misy ny fepetra noraisin’ny tompon’andraikitra.